Wararkii ugu dambeeyey qaraxyada Kabul iyo tirada - Axadle Wararka Maanta
Wararkii ugu dambeeyey qaraxyada Kabul iyo tirada
Kabul (Axadle) – Ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada Marines-ka Mareykanka ayaa ku dhintay labada qarax ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha militariga.
Wararka ayaa sheegaya in saddex askari oo kale oo Mareykan ah lagu dhaawacay weerarka oo isgu jiray laba qarax iyo weerar toos ah oo uu fuliyey qof hubeysan.
Afhayeenka Pentagon-ka Mareykanka John Kirby ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey dhimashada dhowr askari, hase yeeshee ma uusan bixin tiro rasmi ah.
Guud ahaan 15 qof ayaa ku geeriyootay, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyada, oo uu fuliyey qof is-miidaamiyey, sida uu sheegay mas’uul ka tirsan ururka Taalibaan. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur.
Banaanka garoonka diyaaradaha Kabul ayaa waxaa ku sugan kumanaan qof oo doonaya in galaan garoonka, si halkaas looga qaado oo loo geeyo dalalka Reer Galbeedka, ayaga oo ka cararaya kooxda Taalibaan.
Barcelona’s Champions League group stage matches confirmed
Harry Kane is the captain’s aspect in opposition to the Pacos